Nyocha banyere Echiche na Mbibi - The Word Foundation
Nyocha banyere Echiche na Mbibi
Echiche na Ntucha Akwụkwọ Nyocha
M onwe m na-atụle Echiche na Mbibi ịghọ akwụkwọ kachasị mkpa na nke bara uru ọ bụla e bipụtara n'asụsụ ọ bụla.
Nanị ozi m bụ "ekele gị." Akwụkwọ a emetụtawo ụzọ m, meghee obi m ma mee ka m nwee obi ụtọ! Ekwetara m na mgbagwoju anya nke ụfọdụ n'ime ihe ndị ahụ na-enye m nsogbu na m ka ga-aghọtacha ụfọdụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ, nke ihe ahụ. Ma, nke ahụ bụ akụkụ nke ihe mere m ji nwee obi ụtọ! Na nke ọ bụla gụrụ, m na-enwetakwu nghọta. Harold bụ enyi n'ime obi m, ọ bụ ezie na enweghị m ọgaranya na m zutere ya. Enwere m ekele maka ntọala maka iji ego na-akwụ ndị anyị chọrọ. Enwere m ekele na-adịghị agwụ agwụ!
Ọ bụrụ na a kwadoro m n'àgwàetiti ma nyefee m otu akwụkwọ, nke a ga-abụ akwụkwọ.
Echiche na Mbibi bụ otu n'ime akwụkwọ ndị ahụ na-adịghị agwụ agwụ nke ga-adịka ezi na ihe bara uru nye ụmụ mmadụ iri puku afọ site ugbu a dịka ọ dị taa. Amamihe ya na nke ime mmụọ adịghị agwụ agwụ.
Percival si Echiche na Mbibi Kwesịrị ịkwụsị ọchịchọ ọ bụla dị mkpa nke ndị na-achọ ya maka ezi ihe ederede banyere ndụ. Onye edemede ahụ na-egosi na ọ maara ihe ọ na-ekwu. E nweghị asụsụ okpukpe na-enweghị isi na enweghị nkọwa. N'ịbụ nke pụrụ iche na ụdị a, Percival edewo ihe ọ maara, ọ makwaara nnukwu ihe - n'ezie karịa onye ọ bụla ọzọ edere aha ya. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere onye ị bụ, ihe mere i ji nọrọ ebe a, ọdịdị nke eluigwe na ụwa ma ọ bụ ihe ndụ pụtara mgbe ahụ Percival agaghị ahapụ gị. Ihe na-adọrọ mmasị karịsịa bụ nkọwa ndị dị na ya nke na-akọwa ihe ndị dị omimi dịka mmehie mbụ, ntụgharị uche zuru oke, ọdịda nke mmadụ na ihe kpatara mmekọahụ. Azịza ya nye ajụjụ ndị a dị mma, ihe ikikere na ihe ijuanya. Ụzọ a na-aga n'ihu maka onye ọ bụla na-eche echiche bụ nke doro anya na nkọwa ya nke Great Way dịka ihe kasị mma edere. Oke na nkọwa na nke doro anya, dị ka nnukwu ọrụ Percival na-ebelata ụkpụrụ ya nke onye ọ bụla nwere obi eziokwu nwere ike ịghọta ma mee. Otu ihe doro anya: mgbe ị gụsịrị Echiche na Mbibi, ị ga-etinyeworị echiche ndị ga-eme ka ị nweta ọdịnihu gị. Jikere!
Dịka Shakespeare bụ akụkụ nke afọ niile, otú a ka Echiche na Mbibi Akwụkwọ nke Humanity.
n'ezie Echiche na Mbibi bụ ihe ngosi dị ịrịba ama maka oge anyị.
Ọdịdị na omimi nke Echiche na Mbibi buru ibu, ma asụsụ ya doro anya, zie ezi ma zie ezie. Akwụkwọ ahụ bụ nke mbụ, nke pụtara na o sitere n'echiche nke Percival, ya mere ọ bụ akwa niile, na-agbanwe agbanwe n'oge niile. Ọ naghị ekwu okwu, ọ naghị atụgharị uche ma ọ bụ kwenye. Ọ naghị ekwu okwu nna. Etie nte idụhe ikọ ndomokiet ke ebiet m placedụhe, idụhe ikọ oro m missịneke ifiọk m̀m or m withoutwọrọke n̄kpọ. Otu ga - ahụ ihe yiri ya na mgbakwunye nke ọtụtụ ụkpụrụ na echiche ndị ọzọ dị na nkuzi nkuzi nke Western. Otu na-achọta ọtụtụ ihe ọhụụ, ọbụlagodi ihe ọhụụ ma ọ ga-agbagha ya. Agbanyeghị, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịgaghị ọsọ ọsọ gaa ikpe kama ijide onwe ya n'ihi na Percival anaghị echegbu onwe ya banyere ịgbachitere onwe ya site n'amaghị isiokwu nke isiokwu dị ka ọ na-ekwe ka mgbagha nke ngosi ya kwuo oge na usoro nke ngosi ya. Arịrịọ Heindel na “Okwu nye ndị maara ihe” ga-abụkwa nke dabara adaba mgbe ọ na-agụ Percival: “A na-agba ya ume ka onye na-agụ ya ghara igosipụta otuto ma ọ bụ ụta ọ bụla ruo mgbe ịmụ ọrụ ahụ mere ka afọ ju ya nke ọma na uru ọ bara.”
Akwụkwọ ahụ abụghị nke afọ, ma ọ bụ nke narị afọ, ma nke oge ahụ. Ọ na-egosiputa ezi ihe ndabere maka omume ọma ma dozie nsogbu uche uche nke na-agbagwoju mmadụ anya ruo ọtụtụ afọ.
Nke a bụ otu n'ime akwụkwọ kachasị mkpa e dere na akụkọ a ma ama na amaghi nke ụwa a. Ihe omuma na ihe omuma ahu choro ka o chee echiche, ma nwee "ngba" nke eziokwu. HW Percival bụ onye na-amaghị onye ọ bụla na-ahụ maka ihe a kpọrọ mmadụ, dịka onyinye onyinye ya ga-ekpughe, mgbe a na-enyochaghị mmadụ. Ọ na-eju m anya na enweghị ọrụ nna-ukwu ya n'ọtụtụ "ndepụta a na-atụ aro" na njedebe nke ọtụtụ akwụkwọ dị mkpa na ndị dị mkpa m gụrụ. Ọ bụ n'ezie otu ihe nzuzo kachasị mma na ndị mmadụ na-eche echiche. A na-amụmụmụmụ ọnụ ọchị ọchị na obi ekele, n'ime oge ọ bụla m na-eche banyere onye a gọziri agọzi, nke a maara na ụwa nke ụmụ nwoke dịka Harold Waldwin Percival.
Echiche na Mbibi na-enye ihe ọmụma m nọworo na-achọ kemgbe ogologo oge. Ọ bụ ihe dị egwu, nke na-adọrọ adọrọ na nke na-akpali akpali nye ụmụ mmadu.
Enweghị m nghọta n'ezie, ruo mgbe m natara Echiche na Mbibi, otú anyị si eji echiche anyị akọwa ọdịnihu nke aka anyị.
Echiche na Mbibi bịara OK Ego agaghị azụ ya. Ana m achọ ya ná ndụ m niile.
Mgbe afọ 30 na-ewepụta ihe ndetu site na ọtụtụ akwụkwọ banyere psychology, nkà ihe ọmụma, sayensị, metaphysics, ihe ọmụmụ agbụrụ na ikwu ikwu okwu, akwụkwọ a magburu onwe ya bụ azịza zuru ezu maka ihe niile m na-achọ ruo ọtụtụ afọ. Ka m na-enwetakwa ihe ndị dị na ya na-ebute echiche kachasị mma, nnwere onwe mmetụta uche na nke anụ ahụ na mkpali dị elu nke okwu na-enweghị ike ikwu. Echere m na akwụkwọ a bụ ihe kacha akpasu iwe ma na-ekpughe na enwere m obi ụtọ ịgụ ihe.
Mgbe ọ bụla m chere na m na-adaba n'ime nkụda mmụọ m na-emeghe akwụkwọ ahụ n'enweghị ihe ọ bụla ma chọpụta ihe ọ bụla gụrụ ya nke na-enye m ohere na ike m chọrọ n'oge ahụ. Eziokwu anyị na-eme ka ọdịda anyị bụrụ site na iche echiche. Lee ka ndụ si dị iche ma ọ bụrụ na a kụziiri anyị na site na nwata.
Na-agụ Echiche na Mbibi Ọ na-eju m anya, na-agba m ume, na-enwekwa mmasị miri emi. Nso n̄wed emi! Echiche ọhụrụ dị aṅaa ka m nwere!
Ọ bụghị ruo mgbe m bidoro ịmụ ihe Echiche na Mbibi na m hụrụ ọganihu dị mma ná ndụ m.
Echiche na Mbibi site na HW Percival bụ otu n'ime akwụkwọ kachasị dị ịrịba ama edegoro. Ọ metụtara ajụjụ gbara afọ, Quo Vadis? Ebee ka anyị si? Gịnị mere anyị ji nọrọ ebe a? Ebee ka anyị na-aga? Ọ na-akọwa etu echiche nke aka anyị si bụrụ akara aka anyị, ka omume, ihe, na ihe omume, na ndụ mmadụ niile. Na onye ọ bụla n’ime anyị ga-aza ajụjụ maka echiche ndị a, yana mmetụta ya na anyị na ndị ọzọ. Percival na-egosi anyị na ihe na-egosi dị ka "ọgba aghara" na ndụ anyị kwa ụbọchị nwere nzube na Iwu nke enwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na anyị ga-amalite itinye uche anyị, ma bido Ezigbo Echiche, dị ka akọwapụtara na ọkaibe ya. Percival n'onwe ya kwenyere na ọ bụghị onye nkwusa ma ọ bụ onye nkuzi, mana ọ na-ewetara anyị cosmology dabere na ọgụgụ isi. Eluigwe na Ala nke Usoro na Nzube. Onweghi akwukwo ihe omuma nke gosiputara ozi doro anya ma di nkenke nke di n’akwukwo a. N'ezie n'ike mmụọ nsọ na ike mmụọ nsọ!
Enwetụbeghị m, ma abụ m onye na-achọ eziokwu n'eziokwu na ndụ m nile, achọtawo m amamihe na nghọta dị ukwuu ka m na-achọpụta mgbe niile Echiche na Mbibi.
Echiche na Mbibi dị nnọọ mma nye m. O meela m ụwa nke ọma ma ọ bụ n'ezie azịza maka afọ a anyị bi.
Onwe m, m na-eche na Amamihe-nghọta miri emi-na ozi ọma na nkọwa doro anya dị na Echiche na Mbibi site na HW Percival karịrị ọnụahịa. Ọ bụ n'ebe dị anya ka ndị edemede ukwu dị n'okpukpe ụwa, bụ ndị, ma e jiri ya tụnyere Percival, yiri ka ọ dị nro, na-enweghị mgbagha na mgbagwoju anya. Ihe m na-eme dabeere na nchọpụta 50 afọ. Naanị Plato (nna nke nkà mmụta ihe ndị dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Ụwa) na Zen Buddha (nke dị iche) na-abịa n'ebe ọ bụla nso Percival, bụ nke na-eme ka ha abụọ dokwuo anya n'ụzọ doro anya!
N'ezie, Percival 'amawo ube ahụ,' akwụkwọ ya meghekwara m ihe nzuzo nke eluigwe na ụwa. Enwere m njikere maka jaket ma ọ bụ boneyard mgbe e nyere m akwụkwọ a.
Ruo mgbe m chọtara akwụkwọ a, ọ dịghị mgbe ọ bụla m chere na ọ bụ na ụwa a dị elu, na-eme ka m gbanwee ọsọ ọsọ.
Echiche na Mbibi bụ ezigbo okwu gbasara ọtụtụ isiokwu dịgasị iche iche nke ihe atụ na ọ bụ akwụkwọ nkà ihe ọmụma na nke ahụ. Ekwenyesiri m ike na m ga-anọgide na-ezo aka na ya na nkuzi m na ọrụ m.
Anọ m na-amụ ọtụtụ ọzụzụ maka afọ na nwoke a nwere ya ma mara otú e si agwakọta ya niile ma wepụta ihe ọgaranya nke ndụ na onye anyị bụ / ọ bụghị.
N'agbanyeghi otutu akwukwo m na Theosophy na otutu usoro nke echiche, enwere m mmetuta Echiche na Mbibi bụ ihe kachasị dị ịrịba ama, nke kachasị oke, na ụdị ọgụgụ dị iche iche nke nghọta. Ọ bụ otu otu olu m ga-anọnyere m, ma ọ bụrụ na m bụ maka ihe ụfọdụ kpatara akwụkwọ ndị ọzọ niile.
Agụrụ m ya Echiche na Mbibi ugboro abụọ ugbu a ma sie ike ikweta na akwụkwọ dị otú ahụ dị adị n'ezie.
N'ime iri afọ ole na ole gara aga, ekpuchiwo m ala dị iche iche na-amụ ụlọ akwụkwọ dị iche iche na-eche banyere ọdịdị nke mmadụ n'ụzọ dị mgbagwoju anya nakwa dị ka nghọta kachasị. Nnukwu, ụlọ akwụkwọ na ọrụ m mụtara nwere ihe ọ bụla bara uru inye banyere ọdịdị mmadụ na ọdịnihu ya. Ekem mma kiet ke usen kiet Echiche na Mbibi.
Dị ka onye na-agwọ ọrịa uche na-arụ ọrụ site na ọrụ, ejiwo m ọrụ nke Mr. Percival iji mekwuo ọgwụgwọ na nghọta nke ọtụtụ ndị nwere mgbagwoju anya-ọ na-arụ ọrụ!
Mụ na di m na-agụ akụkụ ụfọdụ nke akwụkwọ ya kwa ụbọchị, anyị achọpụtala na ihe ọ bụla na-eme, ma n'ime ma ọ bụ na-enweghị, enwere ike ịkọwa ya site n'echiche ya nke eziokwu. O tinyewo ihe n'usoro n'echeghị anya na m na-ahụ ka m na-aga gburugburu m kwa ụbọchị. Ntọala ndị a na-eme mkpọtụ ejirila nwayọọ na-atụ ụjọ. Ekwenyere m Echiche na Mbibi nwere ike ịbụ akwụkwọ kachasị mma edere ederede.
Akwụkwọ kacha mma m gụrụ; dị omimi ma na-akọwa ihe niile gbasara ịdị adị mmadụ. Buddha kwuru ogologo oge gara aga na echiche ahụ bụ nne nke ọrụ ọ bụla. Ọ dịghị ihe dị mma karịa akwụkwọ a ịkọwa n'ụzọ zuru ezu. Daalụ.
Anyị niile anụchawo okwu abụọ a ọtụtụ ugboro, "N'ihe niile ị na-enweta, nweta nghọta," na "Mmadụ maara onwe gị." Amaghị m na ọ dịghị ihe ọzọ dị mma karịa mmalite nke nkwụsị a karịa ọrụ Harold W. Percival